Wenezdee, Machị 31, 2021 Wenezdee, Machị 31, 2021 Douglas Karr
Site na CodePen, enwere m ike ịrụ ọrụ niile dị mkpa deputa mgbako Agbakwunyere m na saịtị ahụ. Imirikiti ihe okike na CodePen bụ ihe ọha na eze na-emeghe. Ha bụ ihe ndị dị ndụ ndị ọzọ na obodo nwere ike ịmekọrịta, site na obi dị mfe, ịhapụ ịza ajụjụ, ịdụ ala na ịgbanwe maka mkpa nke ha.
Site na CodePen, ị nwere ike ịgbanwe echiche gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka mpịpị dị n'aka ekpe, aka nri ma ọ bụ ala ka ị na-arụ ọrụ… ma ọ bụ lee HTML na taabụ ọhụrụ. Akụkụ akụkụ dị n'akụkụ na-arụ ọrụ nke ọma iji nwalee usoro mmeghachi omume gị ebe ọ bụ na ịnwere ike ịhazigharị nha pane ahụ a na-ahụ anya.
Nwere ike ịhazi nke ọ bụla n'ime edemede gị na-arụ ọrụ na Pensụl, jikọta ha na Projects (nchịkọta akụkọ ọtụtụ faịlụ), ma ọ bụ ọbụna mepụta mkpokọta. Ọ bụ ihu ọma a na-arụ ọrụ Pọtụfoliyo saịtị maka koodu njedebe n'ihu ebe ị nwere ike ịgbaso ndị edemede ndị ọzọ, gbanye ọrụ ndị ọzọ na-ekerịta n'ihu ọha n'ime nke gị ịgbanwe, ọbụnakwa mụta otu esi eme ụfọdụ ihe ụtọ site na nsogbu.
Nwere ike ịchekwa dị ka GitHub Gist, bufee na zip file, yana ọbụlagodi embed pen na isiokwu dị ka nke a:
Eburu Amuma ahịa Mmetụta Of Online Nyocha by Douglas Karr (@onyedikachi_)
Aga m agba gị ume ka ị debanye aha. A ga -enye gị aha na email ha kwa izu ma nwee ike ịgbakwunye ndepụta na ndepụta RSS gị ka ị wee hụ mkpịsị akwụkwọ edepụtara ọhụrụ. Ma, ọ bụrụ na ịmalite ịchọ ma ọ bụ na-eme nchọgharị ọha itienna e, ị ga-ahụ ụfọdụ ịrịba oru… ọrụ bụ nnọọ nkà!
soro Douglas Karr na Codepen
Thedị a kwụrụ ụgwọ, CodePen Pro, na-enye ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ maka arụmọrụ ma ọ bụ ndị otu emelitere - gụnyere mmekorita, usoro, nnabata ngwa ahịa, echiche nkeonwe, yana ọbụlagodi ọrụ ejiri mpaghara gị ma ọ bụ subdomain gị rụọ ọrụ. Ma, n'ezie, CodePen na-enye nnukwu nchekwa na njikọ Github ebe ndị otu gị niile nwere ike ịrụ ọrụ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịnwale koodu dị mfe dịka m nọ, CodePen bụ ngwa bara nnukwu uru.